Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTammy
Inkampu yaseYaqui kunye nezindlu zangasese zibekwe emazantsi eentaba ezimnyama kwiGolden Valley, eArizona. Le ndlu yikhabhinethi eyilwe kakuhle Ngazo zonke izinto eziluncedo zokukhwela i-backpacking okanye inkampu / uhambo lwe-glamping Okanye nje ibhedi ekhululekile ngobusuku kwiihambo zakho ... kunye neembono ezimangalisayo zeentaba ezimnyama. Yonwabela izandi zendalo njengemingxunya, iingcuka kunye neenkomo ngamaxesha athile asimahla kuluhlu lwaseArizona. Sifumaneka kwiikhilomitha ezi-3 ukusuka ku-Route 66 kunye neekhilomitha ezili-12 ukusuka e-Oatman (kwidolophu yaseGost)
Ikhabhathi ineebhedi ezi-2 ezingatshatanga, i-hammock, ikhitshi elincinci, indlu yangaphandle kunye nombane wamandla elanga kunye neshawari yangaphandle. Ubushushu bepropane buyafumaneka kwi-10 yeedola ezongezelelweyo ngogcino. Kufuneka uzibonelele ngengxowa yakho yokulala okanye iingubo... Iilineni azibonelelwanga kwaye kufuneka ushiye ikhabhathi "icocekile" okanye ingcono... ukwenzela undwendwe olulandelayo. Oku kugcina amaxabiso ephantsi kumntu wonke?
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
Ndingu-1 kumakhaya ama-3 apha kwiinduli ezimnyama zaseGolden Valley. Nceda uhloniphe impahla yommelwane wam kwaye ungaceli nto? Ndibhalele ngemibuzo yakho?
Ungandithumelela umyalezo nge-24/7 ngayo nayiphi na inkxalabo okanye imibuzo?
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Golden Valley